Jawaab Deg Deg ah: Marka xawaaraha nolosha si dhakhso leh u socdo, kuleylka cuntada ku jirta foornada microwave ayaa noqota mid caan ah. Si kastaba ha noqotee, inbadan oo naga mid ah ma cada inay jiraan shuruudo gaar ah oo ku saabsan weelasha lagu ridi karo foornada microwave, si loo ilaaliyo safkeena shaqsiga ah ...
Dhalada udugga Reed Diffuser Glass Dhalo
Waa xilligan sanadka, oo ah qabow oo aynaan awoodin inaan daaqadaha u furno si aan hawada uga soo saarno guriga muddo bilooyin ah hadda, urkaas wuxuu bilaabmayaa inuu door weyn ka ciyaaro sida aan u dareemeyno gurigeenna. Waxaa jira qaabab yar oo looga dhigi karo sidii riwaayad impressi ah ...
Dhalada Buufinta Muraayadda (oo ku habboon alaabta nadiifinta gurigaaga ee DIY ah!)
Dhalooyinka buufinta dhalooyinka ayaa runtii ah xulashada ugu fiican ee lagu keydin karo alaabadaada nadiifinta guriga lagu sameeyo ee dabiiciga ah. Sababtoo ah mid ka mid ah halista caaggu waa awoodda ay u leedahay inay kiimikada ugu daarto wax kastoo ay ku jirto. Marka, aan doorano derin dhalo ...
Dhalada Afka ah ee joogtada ah Mason Dhalooyinka 8oz oo leh Daboolida birta hawada ee hawada
Dhalooyinka Afka ah ee Mason Dhalooyinka, 8 wiqiyadood oo dhalo ah oo dhalada ah oo leh daboolyo bir ah oo hawo qabow ah oo loogu talagalay diyaarinta cuntada, keydinta cuntada, qasacadaynta, cabitaanka, Oats habeenkii, Jelly, Cunto qallalan, dhir udgoon, saladh, Yogurt Glass Muraayada - Muraayad kasta oo muraayad ah ...
Imaanshaha Cusub: Qalabka Khamiirinta !!!
Khudaarta khafiifka ah: Fudud iyo Probiotic-Rich! Faa'iidooyinka Khudaarta shiidan: Maxaad u dooneysaa inaad sameysato khudaar aad khamiiris leedahay? Waxaa jira hadalo badan oo maalmahan ku saabsan caafimaadka caloosha, maadaama aan ogaanay kaliya ...
FUDUD-SI AAD U ISTICMAALO QALABKA MUUQAALKA AH EE LIIDNIMADA LAGU QAADO: mesh-ka waxaa lagu sameeyay birta birta ah si aan waligaa loo arkin miridh! Lagu shaabadeeyey astaanta Trellis si aad u kala soocdo siddooyin kale. KA Wanaagsan P ...